Daisy (ဒေစီ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဖက်ဝင် » Daisy (ဒေစီ)
Daisy (ဒေစီ) ကဘာလဲ။
ဒေစီ ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
ဒေစီပန်း ကို အနာသက်သာဖို့နဲ့ ဝမ်းလျှောခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်းတွေအတွက် အသုံးပြုကြပါတယ်။ ဒေစီပန်း လက်ဖက်ရည်ကို ချောင်းဆိုးခြင်း၊ လေပြွန်ရောင်ခြင်း၊ အသည်းရောဂါ၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ ရောင်ရမ်းခြင်းတွေအတွက် လူအချို့က သောက်သုံးကြပါတယ်။ သူ့ကို သွေးတိတ်စေတဲ့အရာအဖြစ်လည်းကောင်း၊ သွေးသန့်စင်ပေးတဲ့အရာအဖြစ်လည်းကောင်း အသုံးပြုကြပါတယ်။
ဒေစီပန်းကို အနာတွေနဲ့ အရေပြားရောဂါတွေအတွက် တိုက်ရိုက်လိမ်းပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ဒေစီပန်း ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လုံလောက်တဲ့ လေ့လာမှုတွေ မရှိသေးပါဘူး။ ပိုမို သိလိုတဲ့ အချက်အလက်တွေ ရှိရင် Herbal ကျွမ်းကျင်သူ (သို့) ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လေ့လာမှု အချို့က ဒေစီပန်းဟာ မှိုတွေကို သတ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ volatile oil တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ thujone ဟာ တံတွေးထွက်မှုနဲ့ သွေးစီးဆင်းမှုကို မြင့်တက်စေနိုင်ပြီး စိတ်ကိုပါ ပြောင်းလဲစေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒေစီ အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ဒေစီပန်း ကို အေးမြပြီး ခြောက်သွေ့တဲ့ နေရာတွေမှာ ထားသင့်ပြီး အပူနဲ့ ရေငွေ့ရိုက်ခြင်းကို ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။
ဒေစီ က ဘယ်လောက်စိတ်ချရလဲ
ဒေစီပန်း ကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ နို့တိုက်နေတဲ့ မိခင်တွေမှာ၊ ကလေးတွေမှာ အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။
ဒေစီ ကနေ ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမျိုးတွေကို ခံစားရနိုင်မလဲ
ဒေစီပန်း ကနေ အောက်ပါဆိုးကျိုးတွေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဒေစီ ကိုအသုံးပြုခြင်းကနေ ဘယ်လိုဓါတ်ပြုမှုတွေရှိလာနိုင်သလဲ
ဒေစီပန်း ဟာ သင်အခုသောက်နေတဲ့ ဆေးတွေ (သို့) ရောဂါအခြေအနေတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ပါတယ်။ အသုံးမပြုခင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
ဒေစီ အတွက် ပုံမှန်သောက်သုံးရန်အညွှန်းက ဘယ်လောက်လဲ
ဒေစီပန်း ကို အသုံးပြုရမယ့် အချိုးအစားက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူနိုင်ပါဘူး။ အသက်အရွယ်၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ အခြားအချက်အလက်တွေပေါ်မူတည်ပါတယ်။ Herbal supplements တွေဟာ အမြဲလုံခြုံစိတ်ချရမှု မရှိပါဘူး။ သင့်လျော်တဲ့ အချိုးအစားကို သိရှိနိုင်ဖို့ ကျွမ်းကျင်သူ (သို့) ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
ဒေစီ က ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့လာလဲ
ဒေစီပန်း ကို အပင်ခြောက်ပုံစံမျိုးနဲ့ ရရှိနိုင်ပါတယ်
Print version. Page 221.
Daisy. http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono-9-wild%20daisy.aspx?activeingredientid=9&activeingredientname=wild%20daisy. Assessed August 7,
နေမကောင်း ဖြစ်နေတာလား။ မြန်မြန်သက်သာအောင် ဒါလေးတွေလုပ်နော်